အရည်အတွက် အများကြီးထုလုပ်လာရတဲ့အခါ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုတွေ လက်ရာမကျအောင် ဘယ်လိုဂရုစိုက် ဖြစ်လဲ ကိုအောင်ကျော်ထွန်း - Popular
ပန်းချီ၊ ပန်းပုပညာရှင် ကို အောင်ကျော်ထွန်းက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းမွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဖေဖော် ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း ၃ လက်မအရွယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်တုတွေကို သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်မှ မိတ်ဆွေများကို မဲဖောက်ကာ လက် ဆောင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ လည်း အဲဒီလိုလုပ်ချင်ပေမယ့် ဗိုလ် ချုပ်ရုပ်တု ထုလုပ်မှုတွေနဲ့ မအားလပ် ရအောင် ဖြစ်နေရတဲ့အတွက် ကံ စမ်းမဲဖောက်ပေးဖြစ်မလားဆိုတာကို တော့စဉ်းစားနေတုန်းပဲလို့ ကိုအောင် ကျော်ထွန်းကပြောပါတယ်။ပန်းချီ၊ ပန်းပုပညာရှင် ကို အောင်ကျော်ထွန်းက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းမွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ ဖေဖော် ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း ၃ လက်မအရွယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်တုတွေကို သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်မှ မိတ်ဆွေများကို မဲဖောက်ကာ လက် ဆောင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ လည်း အဲဒီလိုလုပ်ချင်ပေမယ့် ဗိုလ် ချုပ်ရုပ်တု ထုလုပ်မှုတွေနဲ့ မအားလပ် ရအောင် ဖြစ်နေရတဲ့အတွက် ကံ စမ်းမဲဖောက်ပေးဖြစ်မလားဆိုတာကို တော့စဉ်းစားနေတုန်းပဲလို့ ကိုအောင် ကျော်ထွန်းကပြောပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုတွေပြီးအောင်ထုနေရတဲ့အတွက် ဒီနှစ်ကတော့မဲ တောင်မဖောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဖောက်လည်းဖောက်ပေးချင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲ မသိဘူးလို့ စဉ်းစားနေတာ။ မဲအရင် ဖောက်ထားပြီးတော့ နောက်မှပေး မယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမလား မသိဘူးပေါ့”လို့ ကိုအောင်ကျော် ထွန်းက ပြောပါတယ်။ ပန်းပုပညာရှင် ကိုအောင်ကျော် ထွန်းက ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုတွေကို အခု လက်ရှိမှာတော့ တော်တော်များ ထု လုပ်ပေးဖြစ်နေပြီး မြန်မာပြည်အနှံ့ မှာတော့ သူထုလုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တု တွေအများကြီးဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့မှာလည်း သူ ထုလုပ်ထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုတွေကို မြန်မာပြည်အနှံ့မှာ ဖွင့်လှစ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဗိုလ် ချုပ်ရုပ်တုတွေ အများအပြားထုလုပ် တဲ့အခါမှာ လက်ရာမကျရအောင် ဘယ်လိုဂရုစိုက်ဖြစ်နေလဲလို့ မေး တော့ . . .
“ကျွန်တော့်နည်းပညာက တစ် ရုပ်ကိုအပိုင်ထုတယ်။ အဲဒီ့တစ်ရုပ်ကို ပရိသတ်တွေက ကြိုက်သွားပြီဆိုရင် အဲဒီ့ပုံစံအတိုင်းထုတယ်။ ရှေ့ကတစ် ရုပ်က ကောင်းထားပြီးပြီဆိုရင် အဲဒီ့ အတိုင်းကို မိုလောင်းပြီး အဲဒီ့အတိုင်း တစ်ပုံစံတည်းထွက်တယ်။ ဒါကျွန်တော့် ရဲ့နည်းပညာပေါ့။ နောက်ထပ်ပုံစံ အသစ်တစ်မျိုးကျရင်လည်း အဲဒီ့ ပုံစံကို ကျွန်တော်စိမ်ပြေနပြေခံစား တယ်။ ကျွန်တော့်တပည့်တွေကို ထု ခိုင်းတယ်။ ကျွန်တ်ာကဘေးကနေပြီး တော့ကြည့်တယ်။ လက်ဝှေ့ပွဲလိုပဲ ပေါ့။ ဘေးကနေကြည့်တဲ့လူက ပို မြင်တယ်လေ၊ တကယ်လုပ်နေတဲ့လူ က မွှန်ပြီးတော့မမြင်တော့ဘူး။ ကြိုက် ပြီဆိုရင်တော့မှ မိုမဖမ်းသေးဘူး။ ခဏလေးထား ထားလိုက်တယ်။ ထားပြီးတော့ သူ့ကိုအာရုံဖြတ်ထား လိုက်တယ်။ မကြည့်တော့ဘူး။ ပြီး တော့မှသေချာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ လို တာလေးတွေပြန်လုပ်တယ်။ အဲဒီ လိုမျိုး စေ့စေ့စပ်စပ်လေးလုပ်ပေးပါ တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာနဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာ တွေကတော့ အားလုံးလက်ခံပါတယ်။ မတူဘူးလို့ ဘာတို့မရှိဘူး။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာကို အလွတ်ပဲ ကျက် ထားလိုက်တော့တယ်”လို့ ပြောပါ တယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တူခြင်းမတူခြင်းအပေါ် ဝေဖန်မှု တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုဝေဖန် မှုတွေအပေါ် ဘယ်လိုခံစားလဲလို့သူ့ကိုဆက်မေးတော့ . . .
“ဒီလိုဝေဖန်ကြတဲ့သူတွေက လည်း ဒီပညာမတတ်တဲ့ လူတွေ လည်းပါတယ်။ သူ့ပါးစပ်ထဲရှိရာ သူ ပြောတာကိုး။ ကိုယ်ကအဲဒါတွေကို လိုက်ခံစားတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ်နာ တာလေ။အဲဒီတော့သူတို့ဝေဖန်တာ ကို ထပ်ကြည့်ပေးတယ်။ သူကမ သိလို့ပြောတာ။ သူကသိလို့ပြော တာ။ သိလို့ပြောတဲ့လူတွေရဲ့ဟာကို ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ သူတို့ပြောတာဟုတ်လားပေါ့။ သူတို့ ပြောတာလက်ခံပါတယ်။ ဟုတ်တယ် ဆိုရင် နောက်တစ်ရုပ်ကျရင် သူတို့ ဝေဖန်တဲ့အချက်နဲ့ ကောင်းအောင် ပြန်လုပ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဝေဖန်တာမဟုတ်ရင် လက်မခံဘူး။သူတို့ ဝေဖန်တာကိုတည်တည်ငြိမ် ငြိမ်ပဲထားလိုက်တယ်။ လုံးဝမကြည့် ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝေဖန်မှုတွေက အတိုက်အခံဘက် ဝေဖန်တာရှိတယ်။ စေတနာနဲ့ဝေဖန်တာရှိတယ်။ နာ မည် ပျက်စေချင်လို့ဝေဖန်တာလား၊ ကောင်းစေချင်လို့ဝေဖန်တာ လား ပေါ့။ကွန်မန့်တွေကို ကျွန်တော်ခွဲ တတ်ပါတယ်”လို့ ကိုအောင်ကျော် ထွန်းကပြောပါတယ်။